Iji Usoro Nkwado Ahịa na B2B Emails | Martech Zone
Iji Usoro Nkwado Ọdịnaya na E-mail B2B
E nwere oge mgbe ndị ahịa na-agbasochi mgbakọ anya, echere m na ọ bụ nnukwu echiche. Dịka ọmụmaatụ, ịnwe enyemaka ma ọ bụ njikọ ọdịnaya na n'elu aka nri nke saịtị gị, na-esote ma ọ bụ nyefee bọtịnụ na aka nri ala, na ebe etiti ka ị nweta ebe nlele dị iche iche. N'oge ndị ọzọ, ọ baghị uru ma ezie na ekwenyere m na Infographic a na-enye nnukwu ihe atụ.
Ozi ịntanetị azụmahịa na azụmahịa (B2B) na-abụkarị otu isiokwu, otu ịkpọ oku na-eme. Ma ha ekwesịghị - GetResponse ebipụtala ihe omuma a na Iji Usoro Nkwado Ọdịnaya na E-mail B2B.
Ghọta ndị ndị ahịa gị bụ na ihe ha chọrọ, wee gosi otu ị ga - esi bụrụ azịza maka mkpa ahụ.
Ndị azụmahịa na-achọkarị ọdịnaya dị ukwuu - ma eleghị anya, ị ga-ele anya karịa ihe ndị adịlarị na saịtị gị. Akaebe ndị ahịa, ọmụmụ ihe, vidiyo, akwụkwọ akụkọ ọcha, nyocha, ọnụ ọgụgụ na ọbụna infographics bụ ọdịnaya dị egwu na-akpali akpali nke nwere ike ịbawanye mmụba na ịpị-pịa na ntụgharị.
Ngọnarị: Anyị bụ ndị mmekọ GetResponse
Tags: ikpe ọmụmụndị akaebe ndị ahịaInfographics Ahịaresearchọnụ ọgụgụvideoswhitepapers